Xanuun aad uga khatar badan Covid-19 oo lagu sheegay geela Bariga Afrika | Radio Hormuud
Xanuun aad uga khatar badan Covid-19 oo lagu sheegay geela Bariga Afrika
Waxaa loo maleynayaa in cudurka dilaaga ah ee Covid-19 uu asalkiisii ka yimid xayawaanka, ka hor inta uusan usoo tallaabin bani'aadanka.
Mid ka mid ah xayawananada ay khubarada sida weyn isha ugu hayaan - aadna uga cabsi qabaan - waa geela.
Geela ayaa hanti u ah bulshooyin badan oo ay Soomaalida ku jiraan
"Marka aad hal neef oo ka mid ah lasoo aaddo qalabka baadhitaanka, wuu ku haraantin karaa. Calyo ayuu ku gaarsiin karaa. Kaadidiisa ayaa ku gaadhi karta," ayey tidhi Millicent Minayo, oo ah cilmi baadhe ka tirsan jaamacadda Washington. Waxay muddo labo sano ah ku mashquulsaneyd in ay tijaabooyin caafimaad ka qaaddo geela iyo xoolo dhaqatada ku nool magaalada Marsabit ee dalka Kenya.
"Qof walba oo geela dhaqda ama xiriir taabasho la sameeya wuu ku dhici karaa cudurka ay qabaan," ayey tidhi.
Geela ayaa laga qaaday tijaabooyin caafimaad, si loo baadho
"Xanuunkaas" waa nooca loo yaqaanno Mers, oo ka mid ah fayrasyada corona, ilaa haddana waxaa la xaqiijiyay in uu toban jibaar ka halis badan yahay cudurka Covid-19 ee ay hadda la daalaa dhaceyso dunida.
Xanuunkan waxaa markii ugu horreysay dalka Sacuudiga lagu arkay sanadkii 2012-kii. Markii lasoo gaadhay 2016-kii, Hayadda Caafimaadka Adduunka waxay sheegtay "in la xaqiijiyay 1,761 kiis oo ah cudurkan lagu magacaabay Mers-CoV, oo ay ku jiraan ugu yaraan 629 dhimasho oo lala xiriiriyay xanuunkaas".
Laakiin maadaama geela uu cudurka wadi karo, halista Mers ee ka dhanka ah bani'aadanka waa mid ay dadka gacmahooda ku sameeyeen.
Isbaddalka cimilada ee ku yimid ficillada ay bani'aadanka sameeyeen ayaa sababaya abaaro baahsan oo horseedaya xoolo dhaqatadu ay isaga tagaan lo'da iyo ariga, iyagoo ka door bidaya geela oo awood u leh inuu muddo dheer u adkeysto oonka.
"Sababta aan daraasaddan uga billownay Kenya waa tirada geela ee aadka ugu badan waddankan. Waliba gaar ahaan deegaanada ismaamul goboleedka Marsabit," ayey tidhi Minayo.
Marsabit waxaa ku nool kaliya 1% ka mid ah shacabka Kenya, laakiin waxaa ku sugan 7% ka mid ah geela guud ahaan Kenya ku nool
Hadda khubaradu waxay si deg deg ah sameynayaan tijaabooyin iyo baaritaanno caafimaad oo laga dhex wado bani'aadanka qudhooda, waxayna rajeynayaan in ay ka hor tagaan sidii uu cudurkaas u fidi lahaa islamarkaana u noqon lahaa safmar la mid ah Covid-19.
"Ma garan kartid sida uu noqon karo cudurkan haddii uu bani'aadanka soo gaaro," ayey tidhi Minayo. " Ma jirin cid ogeyd in Covid-19 uu sidan safmar uga noqon doono caalamka oo dhan, nolosha malaayiin ruuxna u soo afjati doono. Sidaas darteed, waa arrin fiican in laga hor tago ka hor inta aan daweyn lagu khasbanaanin.
"Ka hortagga wuxuu ka fiican yahay daweynta."
3 milyan oo neef oo geel ah ayaa ku sugan gudaha Kenya - tiradaasna waxay ku dhowdahay 10% ka mid ah geela ku nool caalamka oo dhan.